Abanye abantu bakholwa ukuthi ukholo kuNkulunkulu kufanele lusekelwe eBhayibhelini, kodwa ingabe ukholo olusekelwe eBhayibhelini lungayifeza ngempela insindiso? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
60. Abanye abantu bakholwa ukuthi ukholo kuNkulunkulu kufanele lusekelwe eBhayibhelini, kodwa ingabe ukholo olusekelwe eBhayibhelini lungayifeza ngempela insind…
Umsebenzi kaNkulunkulu kuphela ongasindisa umuntu. IBhayibheli ngeke limsindile umuntu, futhi alishintshanga nhlobo eminyakeni eyizinkulungwane eziningi, futhi uma ukhonza iBhayibheli awusoze wawuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele.
Abantu balifundile iBhayibheli kuyo yonke le minyaka, baqhamuke nezincazelo eziningi kakhulu, bazikhandla kakhulu; banokuhluka ngemibono okuningi, futhi abaphikisana ngayo bengaphezi, ngendlela yokuthi sekunezinhlelo zamabandla ezingaphezu kwezi-2000 ezakhiwe namuhla. Zonke zifuna ukuthola izincazelo ezithile ezikhethekile, noma izimfihlakalo ezijule kakhulu eBhayibhelini, zifuna ukulihlola, nokuthola isendlalelo ngomsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, noma isendlalelo ngomsebenzi kaJesu eJudiya, noma ezinye izimfihlakalo ezingaziwa muntu. Indlela abantu abalithatha ngayo iBhayibheli yile enokuthatheka nokukholwa, futhi akekho ocacelwe ngokuphelele indaba yangaphakathi noma ingqikithi yeBhayibheli. Ngakho, umphumela walokho namuhla ukuthi, abantu basenokuzwa ongachazeki wesimangaliso uma sekuza eBhayibhelini; okudlula lokho, benganyelwe yilo bathathekile, futhi bakholelwa kulo. Namhlanje, bonke abantu bafuna ukuthola iziphrofetho zomsebenzi wezinsuku zokugcina eBhayibhelini, bafuna ukuthola ukuthi imuphi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngezinsuku zokugcina, nokuthi iziphi izimpawu ezikhona zezinsuku zokugcina. Ngale ndlela, ukukhonza kwabo iBhayibheli kuya kuba namandla, futhi njengoba ziya zisondela izinsuku zokugcina, baya bezikholwa kakhulu iziphrofetho zeBhayibheli, ikakhulukazi lezo ezimayelana nezinsuku zokugcina. Ngokholo olumpumpuzela kakhulu eBhayibhelini, nangokwethembela okukhulu eBhayibhelini, abanasifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngokokubona kwabantu bacabanga ukuthi iBhayibheli kuphela elingaletha umsebenzi woMoya oNgcwele; iseBhayibhelini kuphela lapho bengathola khona izinyathelo zikaNkulunkulu; iseBhayibhelini kuphela lapho kucashe khona izimfihlakalo zomsebenzi kaNkulunkulu; iBhayibheli kuphela—hhayi ezinye izincwadi noma abantu—okungacacisa yonke into kaNkulunkulu kanye nomsebenzi wakhe sewuwonke; iBhayibheli lingaletha umsebenzi wezulu emhlabeni; futhi iBhayibheli lingaqala futhi liphethe izinkathi. Ngale mibono, abantu abanaso isifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngakho, akukhathaleki, ukuthi iBhayibheli labe liwusizo kangakanani kubantu kudala, seliphenduke isiphazamiso emsebenzini kaNkulunkulu wakamuva. Ngaphandle kweBhayibheli abantu bangafuna izinyathelo zikaNkulunkulu kwenye indawo, kepha namuhla, izinyathelo Zakhe sezigcinwe eBhayibhelini, futhi ukwelula umsebenzi Wakhe wakamuva sekuphenduke kwanzima ngokuphindiwe, futhi kwaba umshikashika owumqansa. Konke lokhu kungenxa yezahluko nezisho ezinedumela zaseBhayibhelini, kanye neziphrofetho ezehlukene zeBhayibheli. IBhayibheli seliphenduke isithixo emiqondweni yabantu, seliphenduke indida ezingqondweni zabo, futhi bamane abakwazi ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu angasebenza ngaphandle kweBhayibheli, abakwazi ukukholwa ukuthi abantu bangathola uNkulunkulu ngaphandle kweBhayibheli, kungasaphathwa ukuthi bakholwe ukuthi uNkulunkulu angashiya iBhayibheli ngesikhathi somsebenzi wokugcina futhi aqale kabusha. Lokhu kuyinto engacabangeki kubantu; abayikholwa, futhi abakwazi ukuyibona nangamehlo engqondo. IBhayibheli seliphenduke isiphazamiso esikhulu ekwamukeleni kwabantu umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi lenze kwanzima ukusabalalisa lo msebenzi omusha.
IBhayibheli incwadi yomlando, futhi uma bewudle waphinda waphuza iTestamente Elidala ngesikhathi seNkathi Yomusa—uma bewenze okwakufuneka ngesikhathi seTestamente Elidala ngeNkathi Yomusa—uJesu ngabe wakudikila futhi wakulahla; uma ubusebenzise iTestamente Elidala emsebenzini kaJesu, ubuyoba umFarisi. Uma namuhla, ufaka iTestamente Elidala Nelisha ndawonye bese udla futhi uphuze, uNkulunkulu wanamuhla uzokulahla; uzobe usele emsebenzini wanamuhla woMoya oNgcwele! Uma udla iTestamente Elidala futhi udle iTestamente Elisha, ungaphandle komfula woMoya oNgcwele! …
Labo abalawulwa imithetho, ngezincwadi, futhi ababoshelwe umlando abasoze bathola ukuphila, futhi abasoze bakwazi ukuthola indlela yokuphila engunaphakade. Lokhu kwenziwa ukuthi konke abanakho kungamanzi adungekile alokhu emile izinkulungwane zeminyaka, esikhundleni samanzi ageleza esuka esihlalweni sobukhosi. Labo abangahlinzekwa ngamanzi okuphila bayohlala beyizidumbu ingunaphakade, beyizinto zokudlala uSathane, futhi bengamadodana asesihogweni. Pho-ke, bangakwazi ukubona uNkulunkulu? Uma uzama ukubambelela kokwakudala kuphela, uzama ukugcina izinto ngendlela eziyiyo ngokuma unganyakazi, futhi ungazami ukushintsha isimo, ulahle okwakudala, uma kunjalo awuyikuhlala ulwisana noNkulunkulu? Izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu zibanzi futhi zinkulu, njengamagagasi agelezayo kanye nokuduma kwezulu okugingqikayo—kepha uyahlala futhi ulinde ukubhujiswa ungenzi lutho, unamathele emikhubeni yakho futhi ungenzi lutho. Ngale ndlela, ungathathwa kanjani njengomuntu olandela ezinyathelweni zeWundlu? Ungakuveza kanjani ubulungiswa ngoNkulunkulu onaye owuNkulunkulu ohlala emusha futhi ongagugi? Futhi amazwi ezincwadi zakho eziqanda angakudlulisela kanjani esikhathini esisha? Angakuholela kanjani ukuthi ufune izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu? Futhi angakuyisa kanjani ezulwini? Okuphethe ezandleni izincwadi ezingakunika ukuthula kwesikhashana, hhayi amaqiniso angakunika ukuphila. Imibhalo oyifundayo iyilokho okungacebisa ulimi lwakho, ayiwona amazwi obuhlakani angakusiza ukuze wazi ngokuphila komuntu, ingasaphathwa eyezindlela ezingakuholela ekulungisisweni. … ubheke ukuthi ubani osebenzayo manje, ukuthi ubani owenza umsebenzi wokusindisa abantu ngezikhathi zokugcina. Uma ungazi, ngeke uphinde ulithole iqiniso, futhi awusoze waba nokuphila.
Okwedlule：Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukungaphambuki eBhayibhelini nokuthi ukuphambuka eBhayibhelini kusho ukukhaphela uNkulunkulu. Ingabe lolu hlobo lombono luqondile?
Okulandelayo：Okholweni lomuntu kuNkulunkulu umuntu akufanele aphambuke eBhayibhelini; noma yini ephambuka eBhayibhelini iwukukhohlisa nokukholwa okuphambene. Ingabe lokhu kunengqondo?
Uma uNyazi lwaseMpumalanga luyindlela yeqiniso, kungani uhulumeni we-CCP njalo ucindezela kanzima, ubopha, futhi ushushisa ngokumelene noNyazi lwaseMpumalanga? Isimo sikaNkulunkulu Siwukulunga futhi ngaPhezu Kwakho Konke Siluthando Ngenxa Yokwenza Umsebenzi Wami, Mina Nganikezwa Insindiso Enkulu kaNkulunkulu Uthando LukaNkulunkulu Lungokoqobo Impela